သူတို့ ဖြိုချ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီလား
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သော့ဖွင့်ဖို့ လိုနေသေးတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းတွေ ထုတ်ဆင့်ဖို့ လိုပါသေးရဲ့။
နို ၁၂၊ ၂၀၀၉။
Man Is A Tool. History Is A Fool. ဆိုတာ Pink Floyd ရဲ့ စာသားတခုထဲကပါ။ တခါတရံမှာ ရာဇ၀င်ဟာ တောက်ထုပ် လွှင့်ပစ်လိုက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ စီးကရက်တိုလိုပါပဲ၊ မီးလောင်ပြာကျအငွေ့ ပျံသွားတဲ့ လူ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်စကြ၀ဠာနံရံမှာ သွားပြန်ဖမ်းမလဲ။
Cool....Sa Ya Yaw